Farmaajo ayaa ka hadlay muhiimada maalinta 26ka June oo xusuus weyn u leh shacabka… – Hagaag.com
5 Luulyo 2020 in Lifestyle // The Nigerian Email Scammer Who Stole Millions From Premier League Club, NY Law Firm, Banks…
5 Luulyo 2020 in English // Rockets target US interests despite arrests: Iraq military…
5 Luulyo 2020 in National // Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dileen Xildhibaan ka tirsanaa Hirshabeelle oo ay gaari kala…
5 Luulyo 2020 in English // Crunch, crunch: Africa’s locust outbreak is far from over…
5 Luulyo 2020 in English // Jets hit Libya’s al-Watiya airbase where Turkey may build base, sources say…
Farmaajo ayaa ka hadlay muhiimada maalinta 26ka June oo xusuus weyn u leh shacabka…
Posted on 26 Juunyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalay xuska sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay maalintii Xorriyadda Gobolada Waqooyi ayaa u hambalyeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa si qoto-dheer kaga hadlay muhiimadda maalinta 26-ka June oo xusuus weyn u leh shacabkeena, maadaama ay ahayd ileyskii koobaad ee halgankii xornimo doonka iyo maalintii koobaad oo calan Soomaaliyeed laga taago dhul Soomaaliyeed oo xora.
“Waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonimo doonka iyo xoreynta Gobolada Waqooyi, oo la mid ahaa doorkii SYL ku lahayd xornimada Gobolada Koofureed. Labada urur waxay lahaayeen xiriir wanaagsan, ujeedooyin iyo aragtiyo mideysan.” Ayuu yri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in wadahadaladii dhab u heshiisiinta ee ku dhisan qalbi furnaanta, is ogolaanshaha, walaaltinimada iyo daacadnimada ee ka furmay Jabuuti 14-kii bishan ay yihiin wadahadalo miro dhal ah.
“Walaaleheena Somaliland waxaan ka raadinaynaa midnimo. Geeska Afrika waxaa ka bilaabmay iskaashi dhaqaale oo Somalia ay fikirkiisa bilowday.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Waxa kaloo uu yiri “Walaalkey Muuse Biixi waa nin Soomaali ah, waa nin waayo arag ah, muddo dheer soo shaqeeyay, wuu garoowsanyahay in aan Somaliland horey u socon karin, anaguna aanan u socon karin, geesinimadeedii wuu leeyahay wuuna bilaabay.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay dib u milicsadaan sooyaalka wanaagsan ee dalkeena, isaga oo walaalaha Waqooyiga ugu baaqay in ay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka umadda Soomaaliyeed.”
“Waxaa xaqiiqo ah, halganku in uusan marnaba dhammaan. Midka ina horyaal, waa uu ka duwan yahay kii gobonnimmo doonka. Waase lagama maarmaan inaan midnimo iyo geesinnimo ku wajahno, annaga oo Ilaahay kaashaneyna, si aan u xaqiijinno mustaqbalka jiilasha dambe ee Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Intii ay socotay munaasabaddu, waxaa hadalo ku aaddan halgankii xorriyadda iyo hiigsiga dadka Soomaaliyeed ee waqtigaas ka jeediyay mas’uuliyiin, waxgarad, Abwaano iyo Hobolada Qaranka oo suugaan ku cabirayay qiimaha midnimada, wadaniyadda iyo wadajirka.
Dhanka kale, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo salaan sharaf ay siinayaan cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, baambayduna ay ku maamuusayso heesta Calanka ayaa calan-saaray Madaxtooyada Qaranka, halkaas oo ay munaasabadda ku qabsoomtay.
Ka qeybgalka Munaasabadan ayaan loo kala harin.
About Admin (10577 Articles)
Rockets target US interests despite arrests: Iraq military…
Crunch, crunch: Africa’s locust outbreak is far from over…
Jets hit Libya’s al-Watiya airbase where Turkey may build base, sources say…
The Nigerian Email Scammer Who Stole Millions From Premier League Club, NY Law Firm, Banks…